1988 – Year – Alpha Premium
Dragons Forever (1988) ##unicode Dragons Forever ကားကတော့ 1988က Jakie Chanရဲ့ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ဒီကားမှာတော့ ရှေ့နေLungဖြစ်တဲ့ Jackie Chanက တရားခွင်မှာ အမှုအမြဲနိုင်တဲ့ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဓာတုဗေဒစက်ရုံတစ်ခုနဲ့ ငါးဖမ်းကန်ပိုင်ရှင်တို့က ရေညစ်ညမ်းမှုနဲ့ တရားရုံးကိုရောက်လာပါတယ်။ ရှေ့နေLungက ဓာတုဗေဒ စက်ရုံကိုယ်စားပြုအဖြစ် ဒီအမှုကိုတာဝန်ယူလိုက်ရပါတယ်။ အမှုကိုအနိုင်ရဖို့အတွက် ရှေ့နေLungက သူ့သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီးတော့ ငါးဖမ်းကန်ပိုင်ရှင် ညီအမနှစ်ယောက်ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ ရှေ့နေLungရော သူ့သူငယ်ချင်း Wang Fei Honတို့က ငါးဖမ်းပိုင်ရှင်ညီအမနှစ်ယောက်ကို တကယ်သဘောကျသွားမိတဲ့အခါ သူတို့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ။ ရှေ့နေLungတာဝန်ယူထားတဲ့ ဓာတုဗေဒ စက်ရုံကရော တရားဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စက်ရုံတစ်ခုဟုတ်ပါ့မလား။ ရှေ့နေLungတစ်ယောက် အမှုကိုအရှုံးခံမလား အနိုင်ယူမလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ဒီကားမှာတော့ Jackie Chanနဲ့အတူ Yuen Biao နဲ့ Sammo Hungတို့က သူငယ်ချင်း၃ယောက်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်သား ဘယ်လိုရီစရာတွေဖန်တီးမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Dragons Forever ကားကေတာ့ 1988က Jakie Chanရဲ႕ကားေကာင္းတစ္ကားပါ။ ဒီကားမွာေတာ့ ေရွ႕ေနLungျဖစ္တဲ့ Jackie Chanက တရားခြင္မွာ အမႈအၿမဲႏိုင္တဲ့ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ...
The Land Before Time Collection (1 to 14) ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စတင်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ The Land Before Time ဆိုတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းမပြောခင် သိစေချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးသူ တွေအကြောင်းပါ …. Producer တွေကတော့ ဂျော့်ဂျ်လူးကပ်စ် နဲ့ စတီဗင်စပီးဘာ့ဂ် တို့ ဖြစ်ကြပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ ဒွန်ဘလုသ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လို ရုပ်ရှင်အကျော်အမော်ကြီး ၃ ယောက်ဆုံထားတဲ့ ဒီလိုစီးရီးမျိုးဟာ Movie Industry မှာ ဒီတစ်ခုတည်းသာ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ကမ္ဘာဦးအစက ဒိုင်နိုဆောလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်မှု ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည် ပြီး လစ်တဲဖု စပိုက်ခ် ဆယ်ရာ နဲ့ ပီထရီဆိုတဲ့ ဒိုင်နိုဆော သူငယ်ချင်းလေးတစ်စုရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ ကာတွန်းကားဆိုပေမယ့် …… ကမ္ဘာဦးတုန်းက ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွေ ဒိုင်နိုဆောအမျိုးအစားတစ်ခုစီရဲ့ သဘာဝလေးတွေကိုပါ သေသေချာချာလေး ထည့်ရိုက်ထားတာမို့ ကလေးလေးတွေရော ...
IMDB: 7.4/10 79,028 votes
The Land Before Time Collection (1 to 14)
Rambo III (1988) ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ အငြိမ်းစားယူနေတဲ့ Rambo တစ်ယောက် သူ့ရဲ့အဖေလိုရင်းနှီးတဲ့ Colonel Trautman သူနဲ့အတူ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ လာခေါ်ပါတယ်။ အနားယူဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားလို့ ငြင်းလိုက်ပေမယ့် Trautman တစ်ယောက်ရန်သူလက်ထဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာ Rambo ဟာသွားကယ်ဖို့ လိုက်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကာ Trautman ကိုကယ်တင်ရင်း ဒေသခံတွေအတွက်ပါကူညီပေးတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Action,Adventure,Dramaဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ [Zawgyi] ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ အျငိမ္းစားယူေနတဲ့ Rambo တစ္ေယာက္ သူ႕ရဲ႕အေဖလုိရင္းႏွီးတဲ့ Colonel Trautman သူနဲ႔အတူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ လာေခၚပါတယ္။ အနားယူဖုိ႔စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားလုိ႔ ျငင္းလုိက္ေပမယ့္ Trautman တစ္ေယာက္ရန္သူလက္ထဲက်သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ Rambo ဟာသြားကယ္ဖုိ႔ လုိက္သြားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ အေျခအေနကုိၾကည့္ျပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိကာ Trautman ကုိကယ္တင္ရင္း ေဒသခံေတြအတြက္ပါကူညီေပးတာကုိေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီဇာတ္ကားေလးကေတာ့ Action,Adventure,Dramaဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
IMDB: 5.8/10 121,075 votes
IMDB: 7.5/10 9,888 votes
Final Justice (1988) 23/6/1988 ကထွက်ရှိထားတဲ့ Final Justice (1988) ဇာတ်ကားလေးပါ ဒီဇာတ်ကားလေးက Action Drama comedy အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး The Unmatchable Match(သေတမ်းစာလုတဲ့ဇာတ်ကား) ရဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး Parkman Wong ကပဲ ရိုက်ကူးထားပြီး မင်းသား Danny Lee နှင့် Stephen Chowတို့တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကြမ်းကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ယောက်စုပြီး ကြည့်ရတဲ့ ၂၁+ကားဖြစ်လို့ ပတ်၀န်းကျင် အခြေအနေကြည့်ပြီးမှသာ ကြည့်ရူကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းနာမည်ကြီး Stephen Chow Movie Collection Myanmar (Sc Channel) က တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Danny Lee သည်ရုပ်ရှင် ပရိုဂျူဆာ / သရုပ်ဆောင်တစ်ယာက်ဖြစ်ပြီး ယခုဇာတ်ကားကိုလဲ Danny lee ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် ချောင်ရဲ့ Legend Of the Dragon ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ...